လျှပ်စစ်မီးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု (ဂေဇက်လွှတ်တော် ဆွေးနွေးခန်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » လျှပ်စစ်မီးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု (ဂေဇက်လွှတ်တော် ဆွေးနွေးခန်း)
လျှပ်စစ်မီးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု (ဂေဇက်လွှတ်တော် ဆွေးနွေးခန်း)
Posted by မှော်ဆရာ on May 23, 2012 in Environment, Opinions & Discussion, Think Different | 71 comments
ကမှော့် ဒိုင်ယာရီ ဂေဇက်လွှတ်တော် ဆွေးနွေးခန်း
အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ မီဒီယာတွေတွင်ကျယ်လာတာတော့ အားလုံးအသိပါ … ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ ဖြန်ချီဖို့ မလွယ်ပေမယ့် အင်တာနက်မှာ တက်ရောက်ရေးသား ဖြန်ချီဖို့က လွယ်ကူမြန်ဆန်နေတယ်..။အင်တာနက် သုံးတဲ့သူတွေကို နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲလို့ရပါတယ်..။ ပထမတစ်ခုက ရေးသားသူ ၊ နောက်တစ်ခုက ဖတ်ရှုသူ..(ချက်တင်ကြီးပဲ ထိုင်ချက်နေသူတွေတော့ သီးခြားထားပေါ့နော…)။ ပြေလည်နေရင်တော့ ဘာမှ ကိစ္စမရှိပါဘူး..။
ကျွန်တော်က အင်တာနက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတော့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ အများစုနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရပါတယ်…။အဲဒီမှာ တစ်ခုတွေ့နေရတာက အင်တာနက်မှာ ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မျက်စိမှိတ်ယုံတတ်သူ များပြားနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ …။အပြင်လောက ထိတွေ့ဆက်ဆံရာမှာတောင် သူတစ်ပါးပြောတာကို ချင့်ချိန်ယုံရပါတယ်…။ဘယ်သူမှန်း ဘယ်ဝါမှန်း မသိတဲ့သူတစ်ယောက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီးရေးသားထားတဲ့ အပြုအမူမျိုးကိုတော့ ရေးတိုင်းယုံသင့်မယုံသင့် စဉ်းစားစေချင်တယ် …။
ဒီတော့ ဒီဂေဇက်ဝက်ဆိုက်ကြီးကို လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမကြီးလို့ သဘောထားလိုက်ပါ…။ဂေဇက်မန်ဘာများအနေဖြင့်လဲ မိမိကိုယ်ကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အနေနဲ့ သဘောထားပေးပါ
ကျွန်တော် တတ်နှိုင်သမျှ ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲ ခွဲပြီး အဆိုတင်သွင်း သွားပါ့မယ် …။ရေးသားရာမှာလဲ တစ်ဖက်ကို ဇောင်းပေးပြီး ရေးသားပါ့မယ် …။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို လက်ခံနှိုင် မလက်ခံနှိုင် ၊ လက်ခံရင်လဲ ဘာကြောင့်လက်ခံတယ် .. မလက်ခံရင်လဲ ဘာကြောင့် မလက်ခံဘူးဆိုတာကို (ရွာသား အသစ်အဟောင်း မခွဲပဲ) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကွန်မန့်ပေးစေလိုပါတယ် …။
ဒီလိုရေးသားရာမှာ မိမိအမြင်ကိုသာလျှင် ရေးသားတင်ပြစေလိုပြီး မိမိအမြင်နှင့် ဆန့်ကျင်ရေးသားသူများအား တိုက်ခိုက်ခြင်း အပြစ်ပြောခြင်း ဆဲဆိုခြင်း ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်း မလုပ်စေလိုပဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆွေးနွေးကြဖို့တော့ အထူး မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်..။ ကမှော့် အနေနဲ့ကတော့ ထောက်ခံသူနဲမည့်ဘက်ကပဲ အစဉ်တစ်စိုက် အဆိုတင်သွင်းမှာပါ ..။
ဒီတော့ ဒီလိုရေးသားခြင်းအားဖြင့် ၁။ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေရန် ၂။ ကိုယ် ယုံကြည်ရာကို ဘယ်သူထောက်ခံခံ မထောက်ခံခံ တစိုက်မတ်မတ် ယုံကြည်တတ်စေရန် .၃။ စကားပရိယယ် ကြွယ်ဝစေရန် ၄။ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုအတတ်ပညာ မြင့်မားလာစေရန် ၅။ တိုင်းရေးပြည်ရာတွင် ယခုဂေဇက်မန်ဘာများ၏ အမြင်သည် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အနေဖြင့် ပါဝင်နှိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ် …။
ယခုပိုစ်မှာတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိုပဲ စောင့်ရှောက်ထိမ်းသိမ်းမလား ..။ အညစ်ညမ်းခံပြီး စွမ်းအင်တွေ ရယူမလားဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ် ..။ကျွန်တော်ကတော့ ထောက်ခံတဲ့သူနဲမယ် ထင်တဲ့ စွမ်းအင် ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ အဆိုတင်သွင်းပါပြီ ..။
သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ တခြားဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေကို ရင်ဘောင်တန်းရုံမျှမက ကျော်တက်နှိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေ သန်းလာပါပြီ ..။ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေးဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသူတွေအတွက်ပဲ ရှိတာပါ ။။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနှင့်လဲ ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသုံးချနှိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါပြီ..။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံအကျဆုံးက လျှပ်စစ်ပါ ..။ဘယ်သူမှ မငြင်းနှိုင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်မီးက လုံလောက်မှု မရှိဘူးဆိုတာရယ် လျှပ်စစ်မီးမလုံလောက်လို့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ်မြင့်မားပြီး ထုတ်ကုန်များ ဈေးကြီးလာတာရယ် လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်ရုံမက ပိုလျှံအောင် ပေးသင့်ပြီ ဆိုတာရယ်ပါ ..။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှာစိုးလို့ ရေအား ၊ ထင်း ၊ ကျောက်မီးသွေး ၊ အနုမြူ တွေကို သုံးပြီး မထုတ်လုပ်ဖူးဆိုပေမယ့် အဲဒီလို မထုတ်လုပ်လို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပိုညစ်နွမ်းနေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ် ..။ မီးမလာလို့ ထင်းသုံးပြီး ထမင်းဟင်းချက်ရတာ … မီးစက်တွေ တမြို့လုံး သောသောညံအောင် နှိုးရတာ .. မီးစက်ကြောင့်ထွက်တဲ့ ကာဗွန်တွေ များလာတာ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတွေပါ …။
တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေ ကြည့်ရင် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေ အကုန်ခံ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ အညစ်နွမ်းခံပြီး စွမ်းအင်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ် ..။ ဆိုးကျိုးတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ကောင်းကျိုးက ပိုများနေတယ် ..။အဲဒီ့နိုင်ငံတွေကို မြန်မာလိုက်မှီဖို့ အလှမ်းဝေးနေတာရယ်… သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖက်တွယ်ထားရင် စွမ်းအင်မရှိလို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပိုမိုညစ်နွမ်းလာတာ ..၊ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးကုန်တာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ တွေ့နေရပါပြီ …။ သစ်ထုတ်ရောင်းလို့ ဆိုတာကို ခဏထားပါ… သစ်မာတန်းမ၀င်တဲ့ ဒီရေတောတွေ မီးသွေးဖုတ်လို့ ကုန်ပြီဆိုတာလဲ သိစေချင်ပါတယ်…။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အနေနဲ့ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ( အနုမြူ ၊ ရေအား ၊ ကျောက်မီးသွေး စသည်ဖြင့် ) လျှပ်စစ်ကို ထုတ်သင့်နေပါပြီ ..။ လေထုညစ်နွမ်းတယ်ဆိုလဲ အဲယားကွန်းလေး ဖွင့်ပြီး အခန်းထဲမှာ နေနေရတာက အမှောင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်နေရတာနဲ့ စာရင်တော့ နဲနဲတော်ဦးမယ် ထင်ပါရဲ့ ….။
(ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနစ်ဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စနဲ့ အရင်းအမြစ်များအား တိုင်းတပါးသို့ေ၇ာင်းချခြင်းအား ယခုပိုစ့်တွင် မဆွေးနွေးစေလိုပါ…။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် စွမ်းအင် ကိစ္စကိုသာ ဦးတည် ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်…။ အမြင်သစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေးနှိုင်ကြပါစေ …။)
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နူကလီးယား စက်ရုံတွေ မရှိသေးဘူး
ဂျပန်မှာ အများကြီး ….
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံ မဖြစ်စလောက်
အမေရိကန်မှာ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတွေက တသီတတန်း
(ဒါပေမယ့်) ပျမ်းမျှလူ့သက်တမ်း သက်တမ်းကတော့ အမေရိကန်တွေ အသက်ပိုရှည်ကြတယ် …
ဂျပန်မှာလဲ မနေချင်ဘူး … အမေရိကန်ကိုလဲ လှမ်းမမျှော်ချင်ဘူး …
ကိုယ့်ရွှေနိုင်ငံကိုသာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိတယ် …။
၀မ်းစာရေး မပြည့်လို့ နေပူထဲထွက် ကုန်ထမ်းရတာ ကျမ်းမာရေးနဲ့တော့ ဘယ်ညီပါ့မလဲဗျာ ..
ချမ်းသာချင်ရင် ချမ်းသာတဲ့သူတွေ လုပ်သလို လုပ်ရမယ် ….။
လိုအပ်နေတာ မီး ၊ ရှိကိုရှိရမှာ မီး ၊ တိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ …. မီး
အိုဇုန်းပေါက်လို့ သေရတာ … မီးလောင်လို့ သေတဲ့ မသာလောက် မများသေးပါဘူး ….
နူကလီးယား ဓါတ်ရောင်ခြည် မသင့်ခင်က … အပူဒဏ်ကြောင့် သေခဲ့တဲ့ တို့အဖိုး.. တို့အဖွားတွေ …။
ဖယောင်းတိုင်ဖိုး မတတ်နှိုင်လို့ စာကျက်ရခက် …. မီတာခ ဆို ဒီလောက် မကျပါဘူးတဲ့ …။
သူတို့ကျ ဆောက်ပြီး တို့ကျ အမှောင်ထဲ နေခိုင်းတဲ့ နူကလီးယား …..
တို့နိုင်ငံ ချမ်းသာမှာလား ….. လာထား …
ရွှေဂက်စ် ….ကျောက်မီးသွေး … ရေအား … တို့နိုင်ငံစနစ်နဲ့ ကိုက်ညီမလား …
မြေအိုးကို ခွဲပြီး ရွှေအိုးကို ယူကြစို့ ….
ရွှေအိုးပိုင် ရင် ပြည်တိုးလှိုင်မှာပေါ့ …..
ဆင်းရဲလို့ ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာ ချမ်းသာကာမှ ကုစားကြတာပေါ့ဗျာ ။။။
Note: အက်ဒ်မင်မှ Poll ပေါင်းထည့်ထားပါသည်။
ဦးမာဃ နဲနဲ ဆွေးနွေးကြည့်မယ်။
ဦးမာဃတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ကိုပဲ အများဆုံး အားထားပြီးတော့ ထုတ်နေတယ်။
အဲဒီအခါမှာ နွေရာသီကျ ပြဿနာတတ်တယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ စတာတွေ တော်တော်ထွက်ပါတယ်။
အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ဘာတွေလုပ်လုပ် ထားလိုက်ပါတော့
အဲဒါတွေကို အသာထားပြီး နောက်ထပ် အသစ်အသစ်သော ရှာဖွေမှုတွေကို နိုင်ငံအတွက် လုပ်ပေးရင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ စွမ်းအင်တွေက ပြန်ပြည့်မြဲမဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ကုန်မှာပါပဲ။
အဲဒီတော့ ဒီစွမ်းအင်တွေကို အရင်အသုံးပြုထားပြီး ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်တွေကို ပိုထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်နိုင်ပါတယ်။(ဦးမာဃ ထင်သလောက်ပေါ့)
ပဲခူးရိုးမ တို့ ရခိုင်ရိုးမ တို့မှာ လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်နိုင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှာ နေကနေ ထုတ်နိုင်တယ်။
ကမ်းရိုးတန်းဘက်တွေမှာ ဒီရေကနေ ထုတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
အခု ဂျပန်နိုင်ငံမှာတောင် နူကလီးယားစက်ရုံတွေကို ပိတ်ဖို့လုပ်နေပါပြီ။
အဲဒီတော့ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကိုပဲ ဦးစားပေးချင်ပါတယ်။
ဒါ ဦးမာဃ တွေးမိတာပါ။
လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပန်ကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ် သည့် လျှပ်စစ်မီးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ် ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သည့်ကိစ္စကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ဆက်စပ်သော ကဏ္ဍအား လုံး ခံစားနေရပြီး မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနတွင်လည်း ယင်းအကျိုးကို ခံစားနေရပါကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦး က နေပြည်တော် MICC တွင်ကျင်းပသည့် UMFCCI ၏ ၂၁ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်တွင် ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကျွန်တော်တို့ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနလည်း တိုက်ရိုက်မဟုတ်တောင် ပတ်သက်ပါဝင်နေတာပါ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာ ညှိနှိုင်းနေ ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ကို အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးစေချင်ပါတယ်။ အခုလုပ် အခုရပုံစံမျိုးတော့ ချက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ခဏ တော့ သည်းခံစောင့်ပေးစေချင်ပါတယ်” ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားလိုက်သည်။
Source: The article first appeared on ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် – အမှတ် ၈၂၁
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားလိုက်
Pollနှင့်ပါသက်၍ဆွေးနွေးရန် Post တဲ့ ပါသက်ဖြစ်နေတယ်
တခြားသူတွေတော့ မသိ.. ကျုပ်ကိုတော့..စာလုံးပေါင်းအမှားထောက်ပြစေချင်တယ်..
မြန်မာပြည်မှာတုံးကလို.. စာစီ..စာစစ်သီးသန့်မရှိပဲ.. ဒီမှာ.. စာစစ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာမို့.. သတ်ပုံအလေ့အကျင့် ရအောင်လို့ပါ…။
ဆိုတော့..လောလောဆယ်.. ဗုတ်ရလဒ်အရ.. မြန်မာတွေ.. “သဘာဝကိုပဲ..အသဲစွဲအောင်ချစ်တော့မည်”တဲ့..
သဘာဝထိခိုက်မယ်ဆိုရင်.. လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်လာတာ.. မလိုချင်ဘူးလို့.. သဘောပေါက်စရာဖြစ်နေတယ်..။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိုပဲ စောင့်ရှောက်ထိမ်းသိမ်းမလား? 75.49% (388 votes)
အညစ်ညမ်းခံပြီး စွမ်းအင်တွေ ရယူမလား? 24.51% (126 votes)
ယူအက်စ်က…စွမ်းအင်ပိုင်းရင်းနှီးမြုတ်နှံမဲ့..သူတွေကို.. ဒီရလဒ်တရားဝင်ပေးလိုက်ရင်.. မြန်မာပြည်ထဲ.. စွမ်းအင်ပိုင်းမှာ.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့.. ပြန်စဉ်းစားလိမ့်မယ်..
အဖမြန်မာပြည်ရေ.. နေရစ်တော့.. အမှောင်ထဲ..လား… :?
ကျနော်ကတော့ အဲ့လိုမမြင်ဘူး၊ သဂျီးတစ်ဖက်စွန်းရောက်တာလို့ ဘဲမြင်ပါတယ်။
US energy giant တွေဖြစ်တဲ့ exxon mobil၊ chevron တို့ မှာ သူ့ company အလျှောက် standard တွေ ရှိပြီးသားပါ။ company တော်တော်များများရဲ့HSE policy အရ company က လုပ်နေတဲ့ operation တိုင်းမှာ minimum rules and guidelines ရှိပြီးသားပါ၊ မြန်မာပြည် က အစုတ်အပြတ်မို့တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေမရှိစေဦး သူတို့policy အရ environment ကို ပက်ပက်စက်စက်လက်လွတ်စပယ်လုပ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုက သူတို့ operation လုပ်ရင် insurance မပါဘဲလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲ့ insurance ကိုရဖို့ ၊တတ်နိုင်သမျှ နည်းအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း HSE policy ချထားတာမရှိ၊ environment ကို ထိခိုက်မှူ့ မနည်းအောင်လုပ်ပြမှာသာရမှာ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်ကိုစေတနာမရှိဘဲ အရည်ညစ်ရအောင်လာစေဦး၊ ဒီကောင်တွေ အတွက်က ဒီအချက်လေးနဲ့ တော့ တွန့် စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
မနေ့ တစ်နေ့ ကမှ စထောင်တဲ့ Daweoo E&P ဆိုရင်တော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။
Poll မေးခွန်းက.. ကျုပ်မေးတာတော့ မဟုတ်ဖူး..။ ပို့စ်တင်သူမေးတာကို.. တင်လိုက်တာ..
ဒါပေမဲ့.. ဒီမေးခွန်းက.. မြန်မာပြည်ထဲစွမ်းအင်ရင်းနှီးမြုတ်နှံမယ့်သူတွေ သိချင်မယ့်မေးခွန်းလို့လည်း ထင်မိတယ်..
သူတို့က.. လှည့်ပါတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့.. အဖြေလိုချင်တာတော့မဟုတ်..
ယူအက်စ်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းကြီးတွေက.. အာမခံ..။ ဥပဒေ..အကုန်တိတျကျထားတယ်ဆိုပေမယ့်.. ဒေသခံရဲ့..သဘောထားကို ဦးထိပ်ထားတယ်လို့ထင်မိတယ်..
ဥပမာ.. အလစကားပြည်နယ်ဆိုရင်..ရေနံသိုက်..။ဓါတ်ငွေသိုက်တွေရှိပေမယ့်.. အစိုးရကဥပဒေအရခွင့်ပြုပေမယ့်.. မတူးကြမလုပ်ကြတာ.. နယ်ခံလူထုရဲ့..သဘောထားကြောင့်ပါ…။ မဲဆန္ဒကောက်ပြီးတော့.. သဘောထားတောင်းရတာပါ..။
တောင်ကုန်း..တောတန်းမြေတွေမှာ.. ရေနံတူးတဲ့..စက်ကလေးတပ်.. တူးတာတောင်… အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်.. ပါတ်ဝန်းကျင်သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းရတယ်လေ..
ဒီPollရလဒ်ကို. ကွန်ဂရက်ရော..။ ရေနံကုမ္ပဏီတွေရော.. မပို့ပါဘူး..။
အမြဲတမ်း..confit of interest ဖြစ်နေတဲ့.. ရှေးစွန်းစွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက.. မြန်မာလူထုအများစုကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့.. မထင်လို့..
လူထုသဘောထားအမှန်ရအောင်… silent majority သဘောရအောင်ကောက်မယ်တွေးပါတယ်..။
သူများနိုင်ငံတွေက လျှပ်စစ်ကိုဘယ်လိုထုတ်လဲ ဘာနဲ့ထုတ်လဲ လေ့လာသင့်တယ် ….သူများတွေ ထုတ်သလို ကိုလဲ လိုက်ထုတ်သင့်ပါတယ်…
တခြားနိင်ငံ တွေက ရေအားနဲ့ ထုတ်ရင် ကိုလဲ ရေအားနဲ့ ထုတ်မှာပေါ့ သူများက ကျောက်မီးသွေးဆိုရင် ကိုယ်လဲ ကျောက်မီသွေးပေါ့ သူများနိင်ငံ တွေကရော လျှပ်စစ်ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထိခိုက်မခံပဲများ အလိုလို လျှပ်စစ်ရနေသလား
စဉ်းစာရမယ် လင်လဲ လိုချင်သေးတယ် ဟိုဟာ ပြုရမှာလဲ ကြောက်နေသေးတယ်( ကလေးမွေးရမှာပြောတာ) ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ
သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်ဒွေ ဟေဟေ့…
သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်ဒွေ ….
ဗိုက်ဆာနေရမယ့် အချိန် နီးပီ ထင့်….
မေးရမှာက ရတဲ့ Natural Gas (clean energy) ကိုပြည်ပရောင်းပြီး ကိုယ်က Coal (dirty energy) ကိုဝယ်သုံးတာ လက်ခံကြမလား လို့ vote လုပ်ရမှာ….